Format Factory 3.0.1 Final - .::just for share::.
Home » Format Factory » Format Factory 3.0.1 Final
Format Factory 3.0.1 Final
Format Factory ကိုတော့တော်တော်များများရင်းနှီးထားဖူးပြီးသား Converter ဆိုတာလူတိုင်းသိကြမှာပါ။
ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး အသုံးတည့်ဆုံးဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ဆုံးထွက် Versionထွက်
လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်မှာတော့ Universal Converter ဆိုတာက ကျွန်တော်ပေးလိုက်
အဓိက ကတော့ Video နဲ့ Audio ပိုင်းတွေကို ကြိုက်တဲ့Format ကနေ ကြိုက်တဲ့ Format
ဖြစ်အောင် Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြား Microsoft Office File Type များနဲ့ Photo တွေကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ DVD , VCD အခွေတွေကိုလည်းတစ်ခွေလုံး Format ပြောင်းပြီး Convert လုပ်
ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုင်စင်မလိုဘူးနော် Free Version ပါ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။
DOWLOAD Format Factory 3.0.1 Final